पेटबाट निकालियो ७७ पाउण्डको ट्युमर, चिकित्सको यस्तो प्रतिक्रिया
एजेन्सी, १४ मंसिर । सबैले उनलाई बियरको भोगी भनेर सोच्थे । उनको पेट नै थियो त्यस्तो तर वास्तवमा उनी बियर पिउँदैन थे । ४७ वर्षिये हेक्टर हर्नानडेजले महिनौंसम्म आफ्नो त्यस्तो असाधारण बडेमानको पेटको रहस्यलाई थाहा पाएनन् ।
‘मलाई लाग्थ्यो म मोटाएँ । म सधैं नै मोटो नै थिएँ,’ हर्नानडेजले भने ।
करिब डेढ वर्ष भयो उनले थाहा पाएको आफ्नो त्यस बडेमानको पेटको रहस्य । वास्तवमा उनको त्यति ठूलो पेटको पछाडीको कारण ७७ पाउण्ड तौलको ट्युमर रहेछ ।
जब उनी प्रत्येक बिहान काममा जानका लागि लस एन्जलस मेट्रोमा चढ्ने गर्दथे त्यहाँ उनलाई सबैले घुरेर हेर्थे । उनी आफ्नो अस्वभाविक पेट लुकाउनका लागि ज्याकेट लगाउँथे यद्यपी त्यो सबैको नजरमा आउँथ्यो नै ।
जब आफ्नो कार्यालयमा उनी सूचना प्रविधि कम्पनीको आफ्नो विलिङ डेस्कमा कामका लागि बस्ने गर्दथे तब उनको भारी पेट दुई खुट्टामाथि अडिएर बस्ने गर्थ्यो ।
सबैले उनलाई बियरको भोगी भन्थे किनभने त्यस पेट बियर खाने व्यक्तिको जसरी मोटाइरहेको थियो ।
उनले डाइट गर्ने विचार गरे तर पनि त्यसले काम गर्न सकेन । दिनदिनै पेटको अस्वभाविक वृद्धि जारी रह्यो जसले गर्दा उनलाई निहुरिएर जुत्ताको लेस बाँध्न पनि समस्या हुन थाल्यो ।
पेट जति तिब्र गतिमा बढ्दै थियो शरीरका अन्य भाग त्यही गतिमा सुकेर हाडछालामा परिणत हुँदै थियो । यसबाट चिन्तित उनी सन् २०१६ मा चिकित्सककहाँ गए जाँचका लागि । जब उनी त्यहाँबाट सर्जिकल ओन्कोलोजिस्ट डा विलियम सेङकहाँ रेफर भएर पुगे, तब परीक्षणपछि उनलाई लिपोसरकोमा, एकप्रकारको दुर्लभ क्यान्सर जसले बोसिलो कोसिकाहरु उत्पादन गर्छ, भएको खुलासा भयो । त्यो पछि उनको पेटमा ठूलो ट्युमरको रुपमा विकास भैसकेको रहेछ ।
त्यो ट्युमर पीडादायी नभएपनि हर्नानडेजको उच्च रक्तचापका कारण उनी छोटो स्वासको समस्या अनुभव गरिरहेको थिए साथै कब्जियत, लगातार मुटु पोल्ने समस्या पनि उनले अनुभव गर्दै आएका थिए । परीक्षण पछि यी बाँकी लक्षण पनि लिपोसर्कोमाकै भएको बुझियो ।
उनको लागि त्यो निकै ठूलो झट्का सावित भयो ।
गत जुलाईमा भएको ६ घण्टा लामो शल्यक्रियामा चिकित्सले उनको पेटबाट ७७ पाउण्ड तौल भएको एउटा ट्युमर निकाल्यो ।
नरम कोसिका भएका ठूला सर्कोमा ट्युमरहरु निकाल्दै आएका र यसै काममा विशिष्टा हासिल गरेका अमेरिकाका सिमित सर्जनमध्ये चिकित्सक साङले पनि आफूले त्यति ठूलो ट्युमर कहिल्यै नदेखेको बताए ।
त्यस भयंकर ठूलो ट्युमर शरीरको अन्य भागमा नफैलिएपनि शल्येक्रियाको क्रममा उनको एउटा मृगौला निकालेर फ्याँक्नु पर्‍यो । ट्युमरले त्यसलाई खाएको कारण त्यो राम्रो काम गर्नसक्ने अवस्थामा थिएन ।
तर चिकित्सका अनुसार लिपोसर्कोमाको पुन बल्झिने सम्भावना हुन्छ र यदि यस्तो भयो भने अर्कोपटकको स्वरुपमा यो थप भयंकर हुन्छ । त्यस समय पनि उपाय भनेको शल्यक्रिया नै हो ।
हर्नानडेज आफ्नो अवस्थाको निगरानी राख्नका लागि प्रत्येक चार महिनामा एकपटक सिटिस्क्यानमा जाने गर्छन् । उनको स्वास्थ्य उपचारमा अहिले हजारौं डलरको बिल उठेको छ जसकारण उनी गो फण्ड मिको माध्यमबाट सहयोगका लागि आग्रह गर्दैछन् ।
शल्यक्रिया गरेयता उनको सम्पूर्ण लक्षणहरु हराएका छन् र उनी ९० प्रतिशत आफ्नो पुरानो अवस्थामा फर्किएका छन् ।
कोरोना भाइरस उपचार व्यवस्थित गर्न दश दिनभित्रै नयाँ अस्पताल बनाउँदै चीन
कुखुरा पहिले कि अण्डा ? वैज्ञानिकहरुले पत्ता लगाए जवाफ !
सानैमा रेलभित्र एक्लै छोडेको भन्दै आमाविरुद्ध मुद्दा दायर, डेढ करोड क्षतिपूर्ति माग
उडिरहेको जहाजभित्रै बम पड्काइदिने धम्की दिएपछि…
प्रेम सम्बन्ध तोडेको झोंकमा… यस्तोसम्म गरे
‘भाग्यमानी’ बालकलाई डस्टबिनबाट जिवितै उद्वार गरियो
सेती नदीमाथिको पुलबाट धकेलेर हत्या गरेपछि…
१० मा पेटभरि खाना, विपन्न मानिस मात्र होइन सम्पन्नले पनि खाना खान्छन्
शार्कको पेटमा भेटियो मान्छेको हात र ब्रेसलेट
हरेक युवाले महिलाबारे जान्नुपर्ने ३ गुप्त कुरा
तपाईंलाई थाहा छ चामलका बारेमा आठ अनौठा तथ्यहरु ?
यी १० देशबारे थाहा छ ? जानिराख्नुस्, नत्र अनजानमै दु:ख पाइएला !